ကြောင်ကြောင်တွေး ကြောင်ကြောင်ရေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကြောင်ကြောင်တွေး ကြောင်ကြောင်ရေး
Posted by ကြောင်လေး on Mar 27, 2012 in Creative Writing, Critic, Think Different | 8 comments
နွေရာသီ ပွင့်လင်းသာယာချိန်ကိုရောက်ခဲ့ပြီ။ဆယ်တန်းစာမေးပွဲတွေလဲပြီးပြီ။ သင်္ကြန် ရက်ကလည်းနီးပြီ။နွေရာသီ သင်္ကြန်ကျောင်းပိတ်ရက် မြန်မာပြည်အနှံ့ ဘုရားဖူးပို့ဆောင်ရေးကားတွေ တဂျီဂျီ လိုက်ပြီးကြေညာနေကြပြီ။
အိမ်ရှေ့မှာ မဒမ်ကြောင်လေးနဲ့ အိမ်နားက အမျိုးသမီးတစ်ယောက် အားတက်သရောပြောနေကြတာ နားစွန်နားဖျား ကြားလိုက်မိသည်။
ပြောကြတဲ့အကြောင်းက ဘယ်ကားက ၀န်ဆောင်မှုကောင်းကြောင်း၊ အစားအသောက်ကောင်းကြောင်း၊ တည်းခိုစရာ စီစဉ်ပေးမှုကောင်းကြောင်း၊ ဘယ်ဘုရားတွေ ပို့မှာဖြစ်ကြောင်း၊ ဘယ်လမ်းကြောင်းတွေ သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောနေကြတာပါ၊
ဒါ့အပြင် မနှစ်က ဘယ်ဘုရားတွေရောက်ခဲ့ကြောင်း၊ ဒီနှစ်တော့ ဘယ်ဘုရားတွေဖူးချင်ကြောင်း၊ ဘယ်ဘုရား ဘယ်ဘုရားသုံးဆူကို မွန်းမတည့်ခင် ရောက်အောင် ဖူးနိုင်ရင် ဘာဖြစ်မယ် ညာဖြစ်မယ် ၊ဘယ်ဘုရား ဘယ်ဘုရားတွေကို နေ့မကူးခင် ရောက်အောင်ဖူးနိုင်ရင် ဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ် ဆိုတာတွေ ပြောသံကြားလိုက်ရပါတယ်။ အကြောင်းအရာအဓိကပြောချင်တာဖြစ်လို့ ဘယ်စေတီတွေဆိုတာကိုတော့သေချာမှတ်မထားလိုက်မိပါ။
ကျနော်စဉ်းစားမိတာလေးတစ်ခုက ဟိုတုန်းက လူတွေဟာ ဘုရားဖူးဖို့အတွက် တောတွေတောင်တွေကိုကျော်ဖြတ်ပြီး လှည်းတတန် ၊လှေတတန် ခြေလျင်တတန်သွားကြရတာပါ။ သာမန်လူတွေက ဘုရားတစ်ဆူနဲ့ တစ်ဆူကို လွယ်လွယ်ကူကူ ကူးပြောင်းသွားဖို့ ခက်ခဲ ခဲ့ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ သမထ၊၀ိပဿနာကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ကြံပေါက်မြောက်ထားတဲ့ဝိဇ္ဇာတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ တန်ခိုး ဣတ္တိပတ် နဲ့ ရောက်အောင်သွားနိုင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဘုရားစေတီ သုံးဆူကို မွန်းမတည့်ခင်ရောက်အောင်သွားဖူးနိုင်ရင် အစွမ်းအစတွေ ၊တန်ခိုးတွေ ရလာမယ်ဆိုတာထက်၊တန်ခိုးအစွမ်းအစရှိနေသူတွေသာ စေတီသုံးဆူကို မွန်းမတည့် ခင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ ပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ခုခေတ်လို လမ်းတွေ ကောင်းနေတဲအချိန်၊ကားနဲ့သွားသွား၊ဆိုင်တွေနဲ့သွားသွား ၊မြင်းလှည်းလေးနဲ့ သွားသွား အဆင်ပြေနေတဲ့အချိန်မှာ စေတီသုံးဆူကို မွန်းမတည့်ခင်ရောက်အောင်သွားဖူးနိုင် ရုံနဲ့ ထူးခြားတဲ့အစွမ်းသတ္တိတွေ ရရှိလာမယ်ဆိုတာကတော့သံသယဖြစ်စရာရှိနေပါတယ်။
မမြင်ရတဲ့ လောကအကြောင်းတရားတွေ ဟာပြောရခက်တယ်လို့ ဆိုကြတာရယ်၊ ကြောင်လေးလဲ မသွားဖူးတာရယ်ကြောင့် ရွာသူရွာသားများထဲက သတ်မှတ်ထားတဲ့ စေတီတွေကို သတ်မှတ်ချိန်အတွင်းရောက်အောင်သွားရောက် ဖူးမျှော် ခဲ့ကြပြီး ဒီလိုထူးခြားမှုမျိုးလေးတွေကို မှတ်မှတ်ရရကိုယ်တိုင် တွေ့ကြုံခဲ့ဖူးသူများ ရှိရင် ဗဟုသုတအဖြစ် ပို့စ်လေးတွေ တင်ပြီး မျှဝေကြစေလိုပါကြောင်း……….။
လစ်ဗရယ်လ် နဲ့ ကွန်ဇာဗေးတစ်ဗ်တွေ ထိပ်တိုက်တွေ့ဦးမယ့်
ပိုစ့် လို့မြင်ပါကြောင်း …ပွဲကြည့် ပိတ်သတ် ပဲလုပ်မှာဖြစ်ကြောင်း..
အန်တီတော့ တစ်ခါမှ အဲဒီလို သတ်မှတ်တဲ့ အချိန် အခေါက်တွေနဲ့ ဘုရားမဖူးဘူးပါ။
အဲဒီလို ဖူးကြည့်ရန်လည်း စိတ်မ၀င်စားပါကြောင်း။
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဂုဏ်တော်ကို ရည်မှန်းပူဇော်ခြင်းသာ အဓိကလို့ မြင်ပါတယ်။
နေရာဌာနတွေ ရောက်အောင်သွားတော့လည်း မျက်ဝါးထင်ထင်ဖူးမြင်ရတဲ့အတွက် ကုသိုလ်စိတ်ပွားတာ အားပေးပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘယ်အချိန်အတွင်း ဘယ်နှစ်ဆူပြီးအောင်ဖူးမှ ဘာအကျိုးတွေရမယ် ဆိုတဲ့ လောကီကျိုးတွေ မျှော်ပြီးပြုတဲ့ အလုပ်တွေကတော့ ကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ပဲ လောဘစိတ်တွေသာဖြစ်တာကြောင့် အားမပေးပါကြောင်း။
သမထ၊၀ိပဿနာကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ကြံပေါက်မြောက်ထားတဲ့ဝိဇ္ဇာတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ တန်ခိုး ဣတ္တိပတ် နဲ့ ရောက်အောင်သွားနိုင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဘုရားစေတီ သုံးဆူကို မွန်းမတည့်ခင်ရောက်အောင်သွားဖူးနိုင်ရင် အစွမ်းအစတွေ ၊တန်ခိုးတွေ ရလာမယ်ဆိုတာထက်၊တန်ခိုးအစွမ်းအစရှိနေသူတွေသာ စေတီသုံးဆူကို မွန်းမတည့် ခင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ ပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
သမိုင်းအထောက်အထားတွေအရ.. မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင် သက်တော်၈၀တန်းထဲ.. လှည့်လည်သွားလာခဲ့တဲ့.. နေရာအကျယ်အ၀န်းဟာ.. မိုင်၅၀ အ၀န်းပဲရှိပါတယ်တဲ့..
မြေပုံထဲ ထောက်ကြည့်အဲဒီလိုပဲ တွေ့ပါတယ်..။ မယုံရင်.. အခုရှိတဲ့.. ဗုဒ္ဓဂါယာရဲ့. မြေပုံမှာကြည့်ပေါ့…။
အဲဒီလွန်ခဲ့တဲ့.. နှစ် ၂၆၀၀ လောက်က.. လူသားတယောက်တသက်တာ ခရီးသွားနိုင်တဲ့.. နယ်ပယ်ဟာလည်း.. အဲဒီလောက်ပါပဲ…တဲ့..။
ဂမ္ဘီတွေ.. ရ,ရတယ်ဆိုပြီး.. လူတွေငွေ..ရွှေ.. ကုန်,ကုန်သွားတယ်ပဲ.. ပြောရမှာလား…
ယူအက်စ်က.. တက္ကသိုလ်ဓါတ်ခွဲခန်းဆီ ရောင်းစားပစ်မယ်..။
စွယ်တော်လေးဆူ နေ့ချင်းဖူးရင် ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေက ဘုရားဖူးလုပ်ငန်းနဲ့ ဘုရားဂေါပကတွေ
လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ့်ငါးနှစ်လောက်တုန်းကလဲ ရန်ကုန်မှာ ကြီးကိုးကြီးမှာ မွန်းမတည့်ခင် ဂုဏ်တော်ကိုးပတ်စီ အဓိဌာန်ဝင်ရင် ဘာဖြစ်တယ်ဆိုလား..
တကယ်တော့ ဘုရားကိုးဆူပတ်ပြေးနေရတာ ဘယ်မှာ သတိ သမာဓိဖြစ်နိုင်ပါ့မတုန်း
အဲဒီအစား ကြီး တခုခုမှာပဲ ကိုးဆူလုံးစာ ပုတီးစိတ်ရင်ပိုမကောင်းဘူးလား..
အဲဒါမျိုးတွေဟာ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာအယူ လုံးဝမဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ်ထင်ရာလျှောက်လုပ်နေတာ လို့ ရှင်းရှင်းပဲမှတ်ချက်ချချင်တယ်။ အဲဒါမျိုးတွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ ဘယ်လိုအပြုအမူမှ မြန်မာပြည်ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဒဘာသာရဲ့ ပီဋကတ်တွေထဲမှာ လုံးဝ လုံးဝ လုံးဝ မပါပါဘူး။
ခပ်လှမ်းလှမ်းကဘုရားတွေ ကန့်သတ်ချိန်တခုအတွင်း အရောက်ဖူးရမယ်ဆိုတော့-
အဲဒါ ဘုရားဖူးတာလား… အပြေးပြိုင်တာလား… ??????
သဂျီးပြောတဲ့အထောက်အထားတွေ အရဆို အဲဒီ တန်ခိုးတွေ ဣတ္တိပတ်တွေ ဆိုတာတောင်မရှိခဲ့ဘူးဆိုရမှာပေါ့။
၀ိဇ္ဇာတွေ၊ ဇော်ဂျီ၊တပဿီ (အဲဒီ တပဿီ ဆိုတာဘာကောင်လဲ ရှင်းပြကြပါဦး)ဆိုတဲ့ဟာတွေက ဘယ်လိုကျင့်စဉ်တွေနဲ့ဘယ်လို စွမ်းကြတာလဲဗျ။
အန်တီပဒုမ္မာရေ အကျိုးလိုလို့ညောင်ရေလောင်း ဆိုတာမျိုးပေါ့
ဦးဦးပါရေ အပြေးပြိုင်တာတော့မဖြစ်နိုင်လောက်ဖူး၊ ကားစီးပြိုင်တာပဲဖြစ်မယ်……
အဲလိုတော့လည်း ဟုတ်ဖူးဗျ၊ ဂမ္ဘီရ အဓိဌာန်ကျင့်စဉ်ဆိုတာ ပြောရခက်တယ်။ ဗေဒင်လက္ခဏာလိုပဲ ယတိပြတ်ငြင်းလို့ မရဘူး။ အဓိဌာန်ကျင့်စဉ် ပုတီးစိပ်နည်းတွေက သူ့ပဌာန်းဆက်နဲ့သူ ဒီနည်းနဲ့မရပေမဲ့ နောက်တနည်းကြတော့ အားထုတ်မှုချင်း အတူတူပေမဲ့ ရသွားတတ်တယ်။ ဒီကျင့်စဉ်တွေက ဘုရားဟောနဲ့တော့ မကိုက်ဘူးပေါ့ဗျာ။ အဖြောင့်တွေးရင်တော့ အဓိဌာန်ပုတီးစိပ်မဲ့အစား ဂုဏ်တော် ဗုဒ္ဓနုဿတိပွားနေတာ ပိုကုသိုလ်ရတယ်ပေါ့။ ဒါလည်းဟုတ်တာပဲ၊ သို့ပေမဲ့ အခုဟာက ကုသိုလ်ထက် လက်ငင်းဆုတောင်းပြည့်ဖို့ လုပ်တာ။ သမထကျင့်နေလို့ မပေါက်ဘဲနတ် နတ်လာမ မဘူး။ အဓိဌာန်ကြတော့ အောင်မြင်ရင် အမခံရနိုင်တယ်။ သို့သော် သူဌေးနဲ့ အလုပ်သမားလို ရတာချင်း အပုံကြီးကွာပါမယ်။ တကယ်တော့လည်း လောကီအကျင့်ထဲမှာ ဈာန်သမထ လောက်ပဲ မြတ်စွာဘုရားက အသိအမှတ် ပြုခဲ့တာမဟုတ်လား။ သံသရာအတွက် အကျိုးသိပ်များမယ်တော့ ထင်ဘူး။ နောက်တခုက ဆုတောင်းပြည့်ခဲ့သည့်တိုင် အထောက်အပံ့ကံ မခိုင်ခံ့ခဲ့လျင် ရလာတာတွေသည် မခိုင်မြဲဘူး။ နားလည်သလောက်တော့ သက်ဆိုင်ရာ ဘုရားတွေရဲ့ အစောင့်အရှောက်နတ်တွေ၊ ဝိဇ္ဇာဂိုဏ်းတွေက ချီးမြှောက်တာ။ အနီးစပ်ဆုံးပြောရင်တော့ သူတို့စပွန်စာလုပ်တဲ့ အားကစားပြိုင်ပွဲမှာ အရည်အချင်းမှီတဲ့သူတွေကို ဆုပေးတဲ့သဘောပေါ့ဗျာ…။ သူတို့မှာလည်း သူတို့အကျိုးနဲ့သူတို့ ရှိမှာပေါ့။ မြန်မာပြည်က သူဌေးကြီးတွေ ဘောလုံးကလပ်အသင်း ငွေကုန်ကြေးကျခံ တည်ထောင်ကြသလိုမျိုး ထင်ပါရဲ့..။ အဓိဌာန်ပုတီးစိတ်ရင် ပြောတဲ့အတိုင်း တိတိကျကျ လုပ်ရတယ် (ကျနော့်အတွေ့အကြုံအရပါ၊ မှားချင်လဲမှားပါမယ်) သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန် ပြောထားထဲ ပုတီးပတ်ရေ ဂါထာအစီအစဉ် တသွေမတိမ်း လိုက်နာရတယ်။ ပုတီးကိုးပတ်အစား ကိုးမိနစ်လို့ ပြောင်းလို့မရဘူး။ စိပ်တဲ့အခါမှာလည်း လွဲချော်မှု ရှိမရှိ သတိအရမ်းထားရတယ်။ ဒါမှ သူပြောသလို ကိုယ်လုပ်ခဲ့မလုပ်ခဲ့ သိမှာလေ။ နောက်ပြီးတော့ လုံလောက်တဲ့ အချိန်ပေးရမယ်။ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ဆုတောင်းရတယ်။ ဂုဏ်တော်ကိုးပတ်ကို တရက်ထဲစိပ်ပြီး အမေရိကန်ဒီဗွီမဲ ပေါက်ချင်လို့မရဘူး။ ရာထူးတက်ချင်လို့ မရဘူး။ ဥပမာ ကြီးကိုးကြီးဆို နှစ်လ၊ ဂြိုလ်သက်စေ့ပုတီးစိပ်နည်းဆို သုံးလ စသဖြင့် လေးလေးနက်နက် အချိန်ပေးရတယ်။ ကျနော်ဖြစ်ဖူးတာတော့ ကိုယ်တောင်းတဲ့ဆု မဖြစ်နိုင်ရင် လုပ်နေရင်းနဲ့ ကြားကာလမှာ အကြောင်းတခုခုကြောင့် အဓိဌာန်ကျင့်စဉ် ပျက်သွားတတ်တယ်။ အဲဒေါ့ တစ်ကပြန်စ ပြန်စိပ်။ နှစ်ခါသုံးခါ ပျက်ပျက်သွားရင် နောက်တနည်းပြောင်းချင်ပြောင်း နောက်တဆုပြောင်းချင်ပြောင်းပေါ့ဗျာ။ ဆုတောင်းပြည့်တယ်ဆိုတိုင်းလည်း ခဏခဏ ဆုမတောင်းရဘူး။ လောဘမကြီးရဘူးပေါ့ဗျာ။ မိမိက သီလ သမာဓိ သိပ်စင်ကြယ်နေရင်တော့ ရနိုင်ပါမယ်။ ဓမ္မသဘောအရ ပြောရင်တော့ ပညတ်အစွဲတွေဖြစ်ပါတယ် သို့ပေမဲ့ပညတ်များနဲ့ လောကီအာရုံများကို တည်ဆောက်ထားလို့ ပညတ်သဘောအရ မရှိဘူးလို့ မပြောနိုင်ပါကြောင်း….
အထက်မှာ ကျနော်ပြောသလိုပဲ အဓိဌာန်ကျင့်စဉ်ဆိုတာ သူ့အဆက်နဲ့သူ ရှိလို့ မဖြစ်နိုင်ထင်ပေမဲ့ ရကောင်းရပါမယ်။ သို့သော် အနည်းဆုံးတော့ အချိန်အတိုင်းအတာတခုအထိ ဝါယမအား စိုက်ထုတ်ဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ ပေါချောင်ကောင်းတော့ သိပ်ဖြစ်နိုင်မယ် မထင်ဘူး။ သဂျီးပြောတဲ့ မြတ်စွာဘုရား လမ်းပဲလျောက်တယ်ဆိုတာ ပစ္စုပ္ပန် ရုပ်ဝါဒီကို အခြေခံသူများ ပြောတဲ့စကားပါ။ မြတ်စွာဘုရား ဈာန်အဘိညဉ်မသုံးဘဲ ခြေလျင်ခရီးကြွတာ စာထဲမှာ အထင်အရှားရှိတာ ငြင်းမရပါဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ တန်ခိုးအဘိညာဉ်ဆိုတာ မရှိလို ပြောလို့ဖြစ်နိုင်သလား။ မြတ်စွာဘုရားသည် သူ့လုပ်ရပ်တိုင်းမှာ အဓိပ္ပါယ်ရှိတယ်။ သူချေချွတ်ရမည့် သတ္တဝါတိုင်းကို ချေချွတ်ခွင့် ဖူးမျှော်ခွင့်ပေးတယ်။ ပြောရတာတော့ခက်တယ်၊ ညဏ်မှီသလောက် စဉ်းစားချေပရရင် လမ်းခရီးမှာ မြတ်စွာဘုရားကို ဖူးမျှော်ထိုက်သူများ ဖူးနိုင်စေဖို့ ခြေလျင်ခရီးကြွတယ်။ နောက်တခါ မြတ်စွာဘုရား သံဃာထုနဲ့ကြွရင် ခြေလျင်ကြွတာများတယ်၊ အကြောင်းပြချက်က (၁) ခရီးတိုလို့ (၂) ခရီးမတိုရင်လဲ နောက်ပါသံဃာတော် တပါး သို့မဟုတ် အားလုံးသည် ကောင်းကင်ခရီးကြွနိုင်တဲ့ တန်ခိုးအဘိညာဉ်မရှိလို့ အားလုံးတပါတည်း လိုက်ပါနိုင်စေရန် ခြေလျင်ကြွတယ်။ သိထားရမှာ တရားရဖို့ဆိုတာ ပါရမီ အတိတ်ကံ အရမ်းလိုတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ သာဝကရှိသလို ရဟန္တာရဲ့သာဝကလည်း ရှိတယ်။ သူ့လူနဲ့သူ၊ ဒါကြောင့် မြတ်စွာဘုရားက ပါသင့်တဲ့နောက်ပါ သံဃာအစုံခေါ်သွားရတယ် မှတ်ပါ။ ဟူး.. မောထှာ.. ပေးစမ်းပါအုံး ဘီယာတကျိုက်လောက် ကိုဘေးနွားကင် တဖတ်နဲ့…
သွားဖူးသူတွေထူးမထူးတော့မသိပါ။ ပို့သူတွေတော့ ထူးသွားကြပါတယ်။ ခရီးသွားတွေဆီက ပိုက်ဆံတွေ လှိမ့်ဝင်လာလို့။
ဒီပိုစ့်ကို တခေါက်ပြန်ဝင်ဖတ်မိတာ တော်သေးရဲ့…
သူကြီးမင်းကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ဓါတ်ခွဲခန်းတွေ လက်ညှိုးထိုးပေါ့…
ကျုပ်ကလဲ ထုံးစံအတိုင်း ထေရ၀ါဒဘက်ကကာပြီး မျက်စိမှိတ်ဘူးခံငြင်းတယ်..။
အဲဒီမှာ.. မထင်မှတ်ပဲ.. ကိုကြောင်ကြီးက သေသေချာချာ ချိန်ချိန်ဆဆ ဖြေရှင်းထားပါတယ်။
အဲဒီကွန်မင့်ထဲမှာ ဂမ္ဘီရ လိုင်း အဓိဌာန်လိုင်း စိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက် အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့
အခုအများအားဖြင့် နားလည်မှု့မှားနေတာတွေကို သုံးသပ်ထားတာပေါ့..။
မှန်တာကို မှန်တယ်လို့ ပြောရမယ်ဆိုတော့..
ကျုပ်တလျှောက်လုံးဘူးခံငြင်းပြီး နောင်လဲငြင်းဦးမယ့် ဂမ္ဘီရဆိုင်ရာ ကိစ္စတချို့ကို
အခုလောလောဆယ်တော့ ကိုကြောင်လေးရဲ့ပိုစ့်ရုပ်မဆိုးအောင် တခွန်းပဲအရင်ပြောနှင့်ပါရစေ။
“အပေါ်က ကိုကြောင်ကြီးပြောထားတာ အမှန်ပဲဖြစ်ပါကြောင်း..”